माओवादी टुंगो लगायो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार को कहाँ ? (सूचीसहित) « Ramechhap News
माओवादी टुंगो लगायो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवार को कहाँ ? (सूचीसहित)
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाएको छ । यस अघि पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा उम्मेदवार टुंगो लगाउएको माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको लागि पनि उम्मेदवार टुंगो लगाएको हो ।
माओवादी र एमालेबीच भएको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड अुनसार १६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये माओवादी केन्द्रले ५९ सिट पाएको छ । माओवादी र एमालेबीच ६० र ४० को भागवण्डा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी प्रदेशसभाको २३० सिट मध्ये माओवादी केन्द्रले ९३ सिट पाएको छ ।
यस्तो छन माओवादीका उम्मेदवार को कहाँ ? (सूचीसहित)